सिन्धुपाल्चोकका ५८ घर पहिरोको उच्च जोखिममा,काभ्रे भुम्लुका ६३ परीवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो – NamoBuddha Khabar
सिन्धुपाल्चोकका ५८ घर पहिरोको उच्च जोखिममा,काभ्रे भुम्लुका ६३ परीवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो
बिहिबार, साउन २४, २०७५ | १४:०८:३७ |
दिपक खत्री/क्रान्ति दोङ,,
अविरल बर्षाका कारण सुनकोशी गाँउपालिका ३ कालिकामा ४३ र थुम्पाखरको १५ घर पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ ।
पहिरोले कलबारी आलेका १२, चिनीखर्कका ५, आवालेका ५, जगनाथ टोलका ७ घर जोखिममा परेका छन् ।
यस्तै अविरल वर्षकै कारण पुरानचोकका ८, उखुबारीका ६ घर पनि माथिबाट आएको पहिरोका कारण जोखिम परेको जिल्ला समन्वय समितिका शाखा अधिकृत समेत रहेका स्थानीय युगबहादुर खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
पहिरोका कारण कालिकाका स्थानीय जोखिम बढेपछि खाली ठाउँमा गएर बसिरहेका छन् ।
राहत तथा उद्धारका लागि सम्बन्धित वडामा पहल गर्ने सुनकोसी गाउपालिका ३ को वडा कार्यलयदले जनाएको छ ।
यसैबीच सुनकोशी गाउपालिका ६ थुम्पाखरमा जमिन भासिएपछि सुन्दरडाँडाका १२ र १२ किलोको १५ घर जोखिममा परेको छ । गाउँपालिकाले तत्काल सुरक्षाका लागि बस्तीको निरीक्षण गरेर ४५ घरपरिवारलाई त्रिपाल र प्लाष्टिक राहत स्वरुप वितरण गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
काभ्रे भुम्लुका ६३ परीवारलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो
यसैबिच काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिका वडा नं. १ का ६३ घरधुरी पहिरोको उच्च जोखिममा परेपछि सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ ।
जेठ २०, २१ र २२ गते निरन्तर परेको अविरल वर्षाका कारण पहिरो जान थालेपछि बस्ती नै जोखिममा परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेका प्रहरी निरिक्षक रविराज थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।
अझै पानी परे ४ वटा बस्ती उच्च जोखिममा पर्ने बताईएको छ । वडाअध्यक्ष खिरबहादुर श्रेष्ठका अनुसार थप पानी परेमा ४ बस्ती निक्कै जोखिममा रहेको छ । ‘चार बस्ती चाहिं निक्कै नै जोखिममा छ । अहिले अन्न पुरीसकेको अवस्था होइन ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले जनधनको क्षति नहोस भनेर उच्च सतर्कता अपनाएका छौं ।’
तीनसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण भुम्लु गाउँपालिका वडा नं. १, गैरीगाउँ पहिरोका कारण जोखिममा परेको छ । पहिरोको जोखिममा परेपछि सो गाउँको १६ घरधुरी जोखिममा परेको हो ।
जोखिममा परेका घरहरु सोमबहादुर श्रेष्ठ, गोपाल श्रेष्ठ, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, नरबहादुर श्रेष्ठ, नारायणबहादुर श्रेष्ठ, चेतबहादुर श्रेष्ठ, हरिब. श्रेष्ठ, नरबहादुर श्रेष्ठ, भद्रबहादुर श्रेष्ठ, कमलबहादुर श्रेष्ठ, ताराबहादुर श्रेष्ठ, रामबहादुर श्रेष्ठ, उमेश श्रेष्ठ, सन्तबहादुर नेपाली, मनोज नेपालीका रहेका छन् ।
त्यसैगरि सोही वडाको ढुंगाना टोलमा माथिबाट पहिरो आई जानुका ढुंगाना र देवी प्रसाद ढुंगानाको घर पुरी अन्दाजी ९ लाख बराबरको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
सोही वडा स्थित देउराली दलित बस्तीमा पहिरो आई ९ वटा घर जोखिमपूर्ण अवस्थाा रहेकोले सो ठाउँमा बसोबास गर्ने बासिन्दालाई सेतीदेवी माविमा सारिएको छ ।
आहालडाँडामा रहेको ८ मा बसेकाहरुलाई पनि सेतीदेवी माविमा सारिएको छ । डिडाँडामा ११ घरधुरी जेखिममा रहेकोले सबै मान्छेहरु सेतीदेवी माविमा सारिएको छ ।
भेर्लाटोलमा विदुर पराजुली र अन्जु पराजुलीको २ वटा घर क्षेति भएको छ । खोलामबारीमा ७ घरधुरी जोखिममा रहेकाले गणेश माविमा सारिएको छ ।